Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda oo u digtay digay dalal si kale u dhigay dhacdadii Jimcihii. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda oo u digtay digay dalal si...
Qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda oo u digtay digay dalal si kale u dhigay dhacdadii Jimcihii.
Dowladda Soomaaliya ayaa u digtay dalal ay sheegtay inay qoraallo marin habaabin ah kasoo saareen dhacdooyinkii Muqdisho ka dhacay Jimcihii ee ciidamada dowladda iyo mudaaharadayaal ay hormuud u ahaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka.
Previous articleWasiirka Dubbe oo u jawaabay dowladda Imaaraadka Carabta..
Next articleSheekh Yuusuf Indha Cadde: Fashiliyihii Maxaakiimta iyo Midowga Murashaxiinta, faalo
Militeriga Chad ayaa ku sheegtay inay jebiyeen maleeshiyaad ka dagaallama waqooyiga kadib dagaallo toddobaadyo ka socday halkaas. Dagaalka ka dhanka ah fallaagada fadhigeedu Libya...
Maxay dadka Zimbabwe u aaminsan yihiin in weli Mugabe uu qabriga...
Madaxweynaha Jubaland oo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha u soo gudbiyay xubaha...